vendredi, 08 juillet 2016 17:00
Ambatondrazaka: Taxi-moto no malaza
Manodidina ny eo amin'ny 400 eo ho eo ireo TAXI MOTO miasa sy mitatitra ireo olona ety Ambatondrazaka ville. Eo amin'ny 20.000 ariary eo kosa ny hofany ho an'ireo mpamily miasa amin'izany, ary 500 ka hatramin'ny 1.000 ariary ny saran-dalana.
vendredi, 08 juillet 2016 15:59
Foara Zama : Tsy latsa-danja ny vary
Maro ireo trano heva nampirantiana sy nivarotana ny vokatry ny faritra Alaotra, izay manodidina eo amin’ny dimampolo eo ho eo, ary tsy latsa-danja amin’izany ny vary izay mampalaza an’i Ambatondrazaka. Eo ny makalioka ary koa ny vary diste izay manome hotrikaina tokoa araka ny filazan’ny ben’ny tanàna eny an-toerana. Nahomby ny foara izay notanterahina teny amin’ny kianja filalaovam-baolina Ambatondrazaka, nanomboka ny 06 jolay teo ary tsy hifarana raha tsy ny 10 Jolay 2016 ho avy izao.
vendredi, 08 juillet 2016 15:23
Alaotra Mangoro : 815 ireo tsy tonga niatrika fanadinana
Ny faripiadidim-pampianarana Moramanga no betsaka mpiadina tsy niatrika fanadinana CEPE indrindra amin’ireo Cisco dimy mandrafitra ny faritra Alaotra Mangoro. Nahatratra 247 mianadahy izy ireo no tsy nipoitra teny amin’ny foibem-panadinana. Ho an’ny Cisco Ambatondrazaka indray dia mpianatra 7.956 aminireo 8.202 voasoratra anarana no niatrika izany. Manodidina ny 173 no tsy niatrika fanadinana ho an’ny cisco Amparafaravola ary 80 ny an’ny cisco Anosibe an’ala. Efa nanomboka ny fitsarana ny taratasim-panadinana izay kendrena ho vita ao anatin’ny folo andro araka ny nambaran'ny lehiben'ny foibem-panabeazam-pirenena Alaotra Mangoro Razafimahaleo Tsiorimandimby. Nilamina amin’ny ankapobeny ny fizotran'ny fanadinana taty an-toerana.
jeudi, 07 juillet 2016 13:15
Farafangana : Nahazo trano ny Alliance Française
Miroso ny asa fanamboarana ny tranon'ny Alliance Française ao Farafangana. Fiaraha-miasa amin'ny fikambanana MAMABE sy ny fikambanana Tsiky Zanaka ka mpianatra injeniera avy any Frantsa no milatsaka an-tsitrapo amin'ny fananganana ny trano miampy ireo mpiasa ao an-toerana. Ny Kaominina kosa no nanome ny tany.
jeudi, 07 juillet 2016 09:52
Mahajanga : Nankalaza ny 6 jolay ny Kaomoriana
Nankalaza ny 6 jolay, fetim-pirenena Kaomoriana ireo teratany kaomoriana miasa sy monina ao Mahajanga. Vavaka no nisantarana ny fankalazana izany, notarihan'ny masoivohon’i Kaomoro ao Mahajanga Bacar Djambaemze. Feno 40 taona amin'ity taona ity ny nazahoan'i Kaomaoro ny fahaleovantenany. Hitohy ny sabotsy izao ny fankalazana ny fetim-pirenena kaomoriana.
jeudi, 07 juillet 2016 09:50
Jean Max Rakotomamonjy : Nanome baiko hitifitra
Tamin'ny fikasan'ireo mpanao gazety hiatrika ny fivoriana azon'ny be sy ny maro hatrehina tao amin'ny Antenimieram-pirenena dia noraran'i Filohan'izany andrimpanjakana izany tsy hiditra ireo mpanao gazety ary nanome baiko entitra ny mpitandro ny filaminana mihitsy aza izy ny hitifitra raha misy ny mbola mikasa ny hiditra ao ihany.
mercredi, 06 juillet 2016 12:03
Raha tsy heno mihitsy ny Jeneraly Florens tamin'ireny tranga teny Mahamasina ny 26 jona ireny, dia tonga any Tsimbazaza izy izao miaraka amin'ny HERY famoretana.
mercredi, 06 juillet 2016 10:34
Mahajanga : Mankalaza ny IDY ny Silamo
Manomboka androany ny fankalazana ny IDY, famaranana ny iray volana fifehezana, ho an'ny mpino silamo manerantany. Manamarika io andro lehibe io ny mpino silamo ao Mahajanga. Nosantarin’izy ireo tamin'ny fiaraha-mivavaka sy diabe namakivaky ny tanàna izany ny maraina teo. Tonga niaraka niombom-bavaka tamin'ireo mpino silamo tao amin'ny Mosquée Noroil Islaam Mahajangabe ny lehiben'ny faritra Boeny Saïd Ahamad Jaffar io maraina io.
mercredi, 06 juillet 2016 08:56
Sambava : Hanomboka anio alarobia ny fitsarana CEPE
Tontosa soa aman-tsara ny fanadinana CEPE sady fifaninanana hidirana 6è raha ny tao an-drenivohitry ny Faritra SAVA. Niisa 13.085 ireo mpiadina voasoratra anarana tao amin’ny fari-piadidiam-pampianarana Sambava ary nitsanjara tamin’ny foibem-panadinana 28. 9 taona ny zandriny indrindra amin’ireo mpiadina, ary 18 ny zokiolona.Hanomboka anio Alarobia ny fitsarana ny taratasim-panadinana ary “amin’ny 12 Jolay 2016 no tombanana hivoan’ny voka-panadinana”, hoy ny lehiben’ny fari-piadidiampampianarana Sambava Totozandry Clément. Nofohanana ihany koa ireo fampisehoana rindrankira izay saika hataon’ireo mpanankato samihafa tany amin’ny faritra SAVA. Tsy nahitana fahatapahana ihany koa ny Jirama ny talata 5 jolay, andron’ny fanadinana, raha isan’andro izany dia maty eo anelanelan’ny amin’ny 4ora maraina ka hatramin’ny 9ora maraina.
mardi, 05 juillet 2016 11:24
Photo: Sobika Atsimo Atsinanana
DREN Asimo Atsinanana : Nizotra ampilaminana ny CEPE
Nizotra ampilaminana ny fanadinam-panjakana CEPE any amin'ny faritra Asimo Atsinanana. Mpiadina miisa 14 701 mitsinjara amina foibem-panadinana 67 ka 5 amin'ireo mpiadina manana olana eo amin'ny fahitana. 8 taona no zandriny indrindra ary 17 taona no zokiny indrindra. Ho an'ny fari-piadidiam-pampianaran'i Farafangana dia 24 no tsy tonga niatrika ny fanadinana.
Page 452 sur 516